Shiinaha Cod Kalluunka Collagen Peptide warshad iyo alaableyda | Huayan
Waxyaabaha laga helo: Kalluunka kalluunka kalluunka kalluunka laga helo
Midab: Caddaan ama huruud khafiif ah
Gobolka: Budada 、 granule
Udgoon yar: kalluun yar
Miisaanka Molecular: 1000-3000Dal, 500-1000Dal, 300-500Dal
Barootiin: ≥ 90%
Astaamaha alaabta: daahirnimo saa'id ah, wax lagudarsan karo, peptide collagen saafi ah ， ur wanaagsan ayuu leeyahay oo dhadhankiisu aad u wanaagsan yahay.
Xirmo: 10KG / Bac, 1bag / kartoon, ama loo habeeyay.
Wax ku oolnimada 'peptide cod collagen:
Adkee maqaarka oo ka saar laalaabku: hagaaji maqaarka maqaarka ah ee waxyeelloobey, maqaarka adkee oo qoyaan maqaarka;
Daahida gabowga: hagaajinta iyo kor u qaadista nuugista maqaarka;
Cadeynta iyo barta iftiinka: xakamaynta waxqabadka tyrosinase, taas oo ka hortageysa melanin dhigida iyo dardargelinta dheef-shiid kiimikaadka.
Lafaha iyo kala-goysyada adag: xoojinta iyo hagaajinta qaabdhismeedka aasaasiga ah ee lafaha iyo kala-goysyada, soo celinta lafaha dhaawacmay, kobcinta jiilka, iyo in si wax ku ool ah loo dhigo oo loo adkeeyo kaalshiyamka.
Qoyaan timaha iyo ciddiyaha: jooji qalajinta timaha, kala-goynta oo ciddiyaha ha ahaato kuwo dhalaalaya oo dhalaalaya;
Hagaajinta hurdada: waxay ka kooban tahay amino acids si loo wanaajiyo tayada hurdo, si wax ku ool ah u yareeya neerfaha una dhiirrigeliya hurdo qoto dheer.
Nidaamka tikniyoolajiyadda adag
Raadinta alaabta ceeriin, tikniyoolajiyad casri ah, oo ka sarreysa shuruudaha sharciyeynta, kala soocidda badeecada oo faahfaahsan, si ay macaamiisha u siiso agab ceyriin oo tayo sare leh oo aamin ah.
U fidiyaan tababarro wax soo saar macaamiisha iibka, tikniyoolajiyadda iyo suuqyada, isla markaana siiyaan caanaha qaaciddada farsamada iyo xalka alaabada macaamiisha.
Hore: Earthworm peptide
Xiga: Kalluunka Badda Oligopeptide